မင်းကောင်းချစ် – “ ရှစ်လေးလုံး..ကမ္ဗည်း ” | MoeMaKa Burmese News & Media
ကမ်လူဝေး ● ငါတို့​ခေတ်​ရဲ့ ငါတို့မြို့
Aung Way - April Review Poem
လင်းအေးထင် - မဒမ်တူးဆိုး ဖယောင်းရုပ်
မင်းကောင်းချစ် – “ ရှစ်လေးလုံး..ကမ္ဗည်း ”
 ရှစ် …… ရှစ်သောင်းလေးထောင်အစု…
အဖိနှိပ်ခံတို့ ပွဲ ။
 လေး…. လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာမကြေ …
 လုံး …. လုံးဝ တထစ်ချ ယုံကြည်ကြ….
မဝေးလှတဲ့တနေ့ …အေးမြမဲ့နေ့ 
အိုးဝေ… အိုးဝေ… အိုးဝေ ။ ။
(ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်)